ProSiebenSat.1 PULS4GmbH သည် Dalet နှင့်အတူ၎င်း၏မီဒီယာလုပ်ငန်းများအားအနာဂတ်သို့ယူဆောင်လာသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ProSiebenSat.1 Pulse4GmbH သည် Dalet နှင့်အတူအနာဂတ်သို့၎င်း၏မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးများရရှိစေ
သြစတြီးယားရဲ့ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကထုတ်လွှင့်အာဏာ Dalet က Galaxy ငါးခုရွေးချယ် သုံးလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီး Multi-Platform ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးလုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှု
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - သြဂုတ်လ 20, 2019 - Dalet, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူအပြည့်အဝတမျး Dalet က Galaxy ငါးခုမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးကိုပြင်ဆင်ခြင်းသြစတြီးယားပုဂ္ဂလိကရုပ်သံဌာနအုပ်စုတစ်စု ProSiebenSat.1 Pulse4အတူစာချုပ်, လုပ်ငန်းအသွားအလာ orchestral လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်သိရပါတယ် အယ်ဒီတာ့အာဘော်ပလက်ဖောင်း။ ProSiebenSat.1 Pulse4ထိုကဲ့သို့သောသြစတြီးယားရဲ့ Next Top Model, အထင်ကရယူအီးအက်ဖ်အေယူရိုပါလိဂ်နှင့်နိုင်ငံတကာအားကစားလွှမ်းခြုံထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲလိဂ်အဖြစ်နှင့်လူကြိုက်များအကြောင်းအရာအလိုက်သတင်းများ, ဟောပြောပွဲနှင့်အရှိုးအစီအစဉ်များအဖြစ် hits မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Dalet က Galaxy ငါးခု installation ကို၎င်း၏သုံးလိုင်းများ Pulse4ဖြတ်ပြီး Cross-functional ဖြစ်စေအသင်း ပူးပေါင်း. နဲ့ multi-platform အကြောင်းအရာ output ကိုပိုကောင်းအောင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေ realigns တဲ့ State-Of-The-Art မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူ ATV လူသိများတဲ့ထုတ်လွှင့်တပ်ဆင်ပါလိမ့်မယ် နှင့် ATV2။
ProSiebenSat.1 Pulse4အသံလွှင့်စနစ်အင်ဂျင်နီယာများ, Christoph Stadlhofer နှင့် Dirk Raschig အဆိုပါခုန်ဘို့ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုအပေါ်မှတ်ချက်ရှေ့ဆက်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့သတင်း, အားကစား, archives နဲ့ program ကိုပြင်ဆင်မှု Workflows စီမံခန့်ခွဲရန် Dalet နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. "ကျနော်တို့ metadata ကိုနှင့်အတူဗဟိုနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံရန်လိုအပ်ပါသည်ကြောင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာရေကူးကန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အလွယ်တကူရှာဖွေပြင်ဆင်အကြောင်းအရာကိုဖြန့်ဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းကို enable ပြုလုပ် tools တွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းမှအစီအစဉ်နှင့်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုအများကြီးပိုမိုမြင့်မား output ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောဤလိုအပ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်မှုတွေကျနော်တို့ Dalet က Galaxy မှငါးပြောင်းရွှေ့အတူပြီးမြောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယျ။ "
Tobias Stößel, ProSiebenSat.1 Pulse4မှာဒီစီမံကိနျး၏စီမံကိန်းမန်နေဂျာဆက်လက် "ဟု The Dalet က Galaxy ငါးခု core ကိုမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် orchestration စွမ်းရည်လက်ရှိတွင်သူတို့ကိုနှိမ့်ချချိန်များစွာကိုလက်စွဲစာအုပ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအလွတ်သွားပါမည်။ ဒါဟာသူတို့ကိုလက်မှာစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ဖို့အချိန်ပိုမိုပေးခြင်း, ပူးပေါင်းတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိရောက်ရှိရန်သူတို့ကို enable ပါလိမ့်မယ်။ "
Dalet က Galaxy ငါးခု၏အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရေး ProSiebenSat.1 Pulse4post-ထုတ်လုပ်မှုမှဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မော်ကွန်းတိုက်မှပြင်ဆင်မှု program ဖို့သတင်းကဏ္ဍကနေအားလုံးစစ်ဆင်ရေးများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ unifies တစ်ခုအဆုံးမှအဆုံးသို့, စည်းလုံးဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကွင်းဆက်ကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ Key ကိုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်: ProSiebenSat.1 Pulse4ရဲ့သုံးလိုင်းများအဘို့သန့်စင် metadata ကိုရတာဟာဗဟိုအကြောင်းအရာ catalog (ပေးခဲ့သည်); browse, ရှာနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Dalet Webspace; စစ်ဆင်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ orchestration များအတွက် Dalet လုပ်ငန်းအသွားအလာအင်ဂျင်; ဗဟိုမှစားသုံးမိပါစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် Dalet Brio I / O ပလက်ဖောင်း; နှင့် Dalet AmberFin အရွယ်မှာ transcoding ။ အဆိုပါ Dalet တပ်ဆင်ခ Dalet Xtend မှတဆင့်Adobe®Premiere® Pro ကိုအပေါ်အယ်ဒီတာများအပါအဝင်အားလုံးအသုံးပြုသူများအကြားချောမွေ့စွာပူးပေါင်းလွယ်ကူချောမွေ့မည် လွန်စွာလိုလားသောPro ကိုTools®®။
"Dalet က Galaxy ငါး ProSiebenSat.1 Pulse4မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့် Multi-Platform ကိုပေးပို့လိမ့်မည်ကာအမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့မီဒီယာရှုခင်းထဲမှာရှင်သန်စကေးမှဖွတစ်ခုနောက်ခံအစိတ်အပိုင်း-based လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူအခြေခံအဆောက်အဦများအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါလိမ့်မယ်" Johann Zemmour, အထွေထွေမန်နေဂျာ, EMEA နှင့်ပွေး, Dalet comments ။ "ကျနော်တို့က၎င်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ခြောသူတို့ထုတ်လုပ်ရန်လမ်းကိုအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ProSiebenSat.1 Pulse4ပရိသတ်တွေ၏မွေ့လျော်ဖို့သူတို့ရဲ့ပရီမီယံထုတ်ကုန်ကယ်နှုတ်မည်သောရည်မှန်းချက်ကြီးလမ်းပြမြေပုံအပေါ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ ProSiebenSat.1 Pulse4နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ဖိလစ် Beuchert, ProSiebenSat.1 Pulse4မှာထုတ်လွှင့် & ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏ဦးခေါင်း, Dalet နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အပေါ်ကောက်ချက်ချ ငါတို့သည်လည်းအနာဂတ်နည်းပညာသို့ကြည့်မျှော်ဒီမှာနေကြတယ် "ကျနော်တို့ Dalet စျေးကွက်အပေါ်သော့ချက်ကစားသမားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ ProSiebenSat.1 Pulse4အတူတကွ In-အိမ်သူအိမ်သားနည်းပညာတိုးတက်လာဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်၏။ "
Dalet က Galaxy ငါး Dalet ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dalet.com.
ProSiebenSat.1 Pulse 4, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.prosiebensat1puls4.com.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့် ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Dalet dalet နဂါးငွေ့တန်းငါး တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor multiplatform ပေးပို့ SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-08-20
ယခင်: JDI @ အငယ်တန်းဒီဇိုင်နာ
နောက်တစ်ခု: SET Expo 2019 မှာလက်တင်အမေရိကဈေးကွက်မှ Ncam Reality 2019 ပွဲဦးထွက်မှ Ncam